Ntughari ohuru nke OnePlus 6 imewe | Gam akporosis
Ihe ngosi OnePlus 6 gosipụtara na nsụgharị ọhụrụ
The OnePlus 6 bụ otu n'ime ndị na-akwado izu ole na ole gara aga. Ọdịdị dị elu nke akara ndị China, nke kwesịrị ịbịakwasị ahịa n'oge na-adịghị anya, bụ ihe ọtụtụ ndị na-agba agba. Ugbu a, enwere ike ịhazi ngwaọrụ ahụ. Ugbu a anyị nwere dị iche iche sụgharịrị nke ị nwere ike ịhụ ihe a na-atụ anya ka ọ bụrụ nhazi ikpeazụ ya.
Ekele maka nsụgharị ndị a, anyị nwere ike ịchọta echiche nke ihe anyị nwere ike ịtụ anya n'aka Onye OnePlus 6. Ọfụma na-abịa mgbe Ọ na-leaked na ekwentị nwere ike ọkọnọ na May 5 na China. Ya mere, anyị na-amụtakwu banyere nkọwa banyere ngwaọrụ ahụ.
Ndị nsụgharị a na-egosi anyị imewe yiri nke ọhụụ ọhụrụ. Ihe na - eme ka anyị kwenye na ọ nwere ike bụrụ nhazi ikpeazụ nke njedebe dị elu. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihihi mmiri. Ya mere, ịkwesighi ịtụkwasị obi na 100% na ha bụ ezigbo onyonyo nke atụmatụ ikpeazụ nke ngwaọrụ ahụ.
Na onyonyo anyị nwere ike ịhụ nke ahụ ọkwa a nwere nnukwu ọkwa na ihuenyo OnePlus 6. Ezie na etiti dị ntakịrị karịa nke OnePlus 5T. Na mgbakwunye, na azụ anyị na-ahụ a ụlọ abụọ, edozi ya n'ụzọ kwụ ọtọ. Ya mere enweghi otutu ihe itu anya na nka.
N'okpuru igwefoto n'azụ anyị na-ahụ ihe mmetụta mkpịsị aka. Ọzọkwa flash ọkụ abụọ. Ọ dị ka ọ bụ na OnePlus 6 rịbara ama maka atụmatụ nke Galaxy S9 + na nke a.. Na mgbakwunye, anyị enweela ike ịhụ na ekwentị na-atụ anya ịbata n'ụdị dị iche iche na ahịa. Maka na anyị nwere ike ịhụ ya na acha anụnụ anụnụ, ọcha na oji.
Ọbịbịa nke OnePlus 6 na-abịarukwu nso. Ọtụtụ mgbasa ozi na-atụ aro na ngosi nke ekwentị ga-ewere ọnọdụ na May 5. Ya mere, ọ nwere ike ịbụ na n'ime izu anọ ngwaọrụ dị elu ga-anọrịrị n'etiti anyị. O doro anya na ụbọchị ole na ole sochirinụ, anyị ga-amụtakwu banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Ihe ngosi OnePlus 6 gosipụtara na nsụgharị ọhụrụ
Xiaomi ga - ebido ekwentị abụọ na Snapdragon 670 n’ahịa
Spotify nwere ike ịmalite ihe ọkpụkpọ ụgbọ ala na-adịghị ọcha